Ngwurugwu ozone na-egosi mgbake mgbe iri afọ atọ gasịrị | Network Meteorology
Ozone oyi akwa na-egosi na mgbake mgbe afọ iri atọ gachara
Iji nyochaa ọnọdụ nke oghere dị na oyi akwa ozone, a tụrụ ogo ozone na stratosphere ruo afọ iri atọ site na satịlaịtị. Mgbe oge a gasịa, n'ikpeazụ Achọpụtala ihe mgbake nke zuru ụwa ọnụ nke oyi akwa ozone, n'ihi mgbalị ndị a gbara gburugburu ụwa iji gbochie iji ihe ndị na-emebi ya eme ihe.
Kedu ezigbo ihe ị rụpụtara banyere ọkpụrụkpụ nke oyi akwa ozone?
1 Ọrụ nke oyi akwa ozone
2 Ozone mgbake
Ọrụ nke oyi akwa ozone
Ozone oyi akwa bụ ihe ọzọ karịa ebe nke stratosphere ebe ịta nke a gas dị elu. Ikuku a na-arụ ọrụ dị ka ọta megide ụzarị ikuku ultraviolet na-emerụ ahụ. N'ihi nke ahụ, anyị anaghị ere akpụkpọ anyị ọkụ naanị site na-ekpughere anyanwụ, osisi nwere ike ịdị ndụ ma mepụta fotoynthesis, wdg.
N'ihi nke a, na oyi akwa ozone dị mma dị mkpa maka ndụ dịka anyị si mara ya na mbara ụwa iji mepụta. Site na mmepe teknụzụ, a na-emepụsị nnukwu gas na-ebibi ozone oyi, dị ka chlorofluorocarbons. Gas ndị a na-emeghachi omume na akụkụ ozone na stratosphere, na-ebibi ha. Maka ha ka a kpụrụ oghere a ma ama na oyi akwa ozone.
Oghere na oyi akwa ozone abụghị oghere n'onwe ya, n'ihi na ọ bụrụ, ọ ga-adị oke oke egwu maka ụwa, ebe ọ bụ na ọ dị na Antarctica ma kwe ka agbaze agbaze nke ice nke kọntinent a. Oghere a bụ nbelata nke ukwuu nke akwa oyi akwa a gburugburu Antarctica.
Mgbe ozone na-emerụ ahụ na-ahapụ ụzarị ultraviolet na-emerụ ahụ site na anyanwụ, ikpughe na ụzarị ọkụ ndị a na-abawanye, na-akpata ọrịa cancer anụ ahụ, cataracts na nsogbu na usoro mgbochi. Ha na-emetụtakwa anụmanụ, ahịhịa, na microscopic phytoplankton.
Ozone, nke dị na stratosphere, dị ihe dịka 11-50 kilomita karịa elu ụwa malitere ibelata na 70s nke narị afọ gara aga. Mbelata kachasị mkpa kemgbe ahụ ozone oyi akwa dị n’agbata 4 na 8% kwa afọ.
Ekele maka nkwekọrịta mba ụwa dịka Montreal Protocol, nke na-egbochi iji na mbenata ihe ndị na-ebibi ozone oyi akwa, agbanweela omume iji belata.
Satellites ndị na-enyocha ma na-enyocha nyocha nke ozone n'akụkụ niile nke ụwa jisiri ike chọpụta akara mbụ nke mgbake. Satellites na-enye nha zuru oke zuru oke, agbanyeghị na njedebe nke oge ha na-egbochi ha ịmekwu panoramas nke ịta ahụhụ nke ozone. Ndị ọkà mmụta ihu igwe na-eme atụmatụ na ịgụ ozone sitere na satịlaịtị ga-adịru afọ iri atọ ma ọ bụ karịa achọrọ ha iji nwee ike nyochaa ọnọdụ ndị na-etinye uche na ozone na oke nkenke.
Dabere na oge nke afọ anyị nọ na ya na ọrụ nke igwe, ọnụọgụ ozone anaghị arụ ọrụ oge niile n'afọ. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa omume na itinye uche na afọ ma ọ bụghị itinye uche. Maka nke a, usoro dị mkpa maka ọtụtụ iri afọ iji kwado ma ụmụ mmadụ na-eme ka oghere dị na oyi akwa ozone ịmalite ịgbake.
Iji zaa nsogbu a, ndị ọkà mmụta sayensị si ESA Mgbanwe Ihu Igwe Ha na-ekwekọ nha sitere na satịlaịtị dị iche iche iji nweta echiche ogologo oge banyere mgbanwe ozone.
“Site na ijikọta data sitere na Initiative Change Initiative na data sitere na NASA, anyi n’ahu nke oma ihe ojoo n’iru ozone tupu 1997 na onodu oma diri ubochi ahu. Zọ ndị dị na stratosphere nke dị n'ofe nke ebe okpomọkụ na-egosi ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ ma na-ebute ụfọdụ mgbake ozone, "ọ na-ekwu. Viktoria Sofieva, Onye Ọkachamara Na-ahụ Maka Ọkachamara na Finnish Meteorological Institute.
N'ihi nke a, anyị nwere ike ịmata taa ụdị nke oyi akwa ozone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozone oyi akwa na-egosi na mgbake mgbe afọ iri atọ gachara
Oyi na-efe na Japan: mba ahụ na-edeba ọnọdụ okpomọkụ ya kachasị dị ala n'ime afọ 48
Ihe oyiyi izizi nke mmetọ ikuku na HD